Mety ve ny fisoratana anarana Dropdown? | Martech Zone
Mety ve ny fisoratana anarana Dropdown?
Talata, Septambra 13, 2011 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
Rehefa naverinay indray ny gazetinay dia te-hanao ny rohy fisoratana anarana ho fisehoan-javatra manjaka amin'ny tranokalanay izahay. Nanampy ampaham-pitetezana eo an-tampon'ny tranokala izahay ary tsy mampino izany. Na dia teo aza ny fahazoanay mpanjifa iray na roa teo aloha, dia mahazo mpamandrika am-polony isan-kerinandro izahay. Mitombo malaza izao ny gazety Teknolojia Marketing, miaraka amin'ireo mpanjifa efa ho 3,000!
Te-hanampy dropdown vitsivitsy vitsivitsy any aho - angamba Facebook, Twitter, Video, Podcast, ary kiheba Karoka. Ity dia fomba tsara hanambarana atiny tsy mila ilain'ny mpampiasa hitety pejy vaovao. Ary koa, ny dian-tongotra alainy dia kely dia kely kokoa noho ny endrika famandrihana ao amin'ny sidebar!
Ny heatmap dia natolotry ny Mamelombelona. Raha tsy ny heatmap dia tsy azoko antoka fa ho tonga saina aho hoe firy ny olona tsindrio eo! Fotoana izao hanamafisana ny fandefasan-kafatra any ambony any mba hahatonga azy ireo te hisoratra anarana.
Ny fotoana no fanamby ho an'ireo matihanina amin'ny marketing